Usoro mgbochi cafe anyị dị mma maka ịwepụ mpaghara patio na mpụga azụmahịa gị! Enwere ike ibipụta akara ngosi nke gị n'akụkụ abụọ nke ọkọlọtọ, na-enyere aka ịmepụta mmata na nweta mmasị nke ndị na-agafe agafe. Isi nwere oghere ise na-enye gị ohere ịkọwa oke na ebe ị ga-anọ na-agbanwe agbanwe. Enwere ike iji ọkọlọtọ nwere akụkụ abụọ ma ọ bụ otu akụkụ kpuchie ihe mgbochi cafe nke na-adọrọ mmasị n'ezie ma hụ na ogige gị pụrụ iche na asọmpi ahụ ma na-enyekwa ndị ahịa gị nchebe ikuku. ọkọlọtọ nwere ike mfe dochie.
(1) Modular na obere imewe, dị mfe ịgbakọta ngwa ngwa
(2) Obere nkwakọ ngwaahịa, ogologo 1m naanị maka njem dị mfe.
(3) Universal base nwere oghere ise, Jikọọ ọtụtụ nkeji na nha ọ bụla na-agbanwe agbanwe
(4) Sistemụ ụjọ na-eme ka ọkọlọtọ gị mara mma mgbe niile
(5) Ọ dị mfe ịtọlite ​​​​ma gbanwee n'elu eserese
(6) Ntụ ọka Tube Steel nwere dayameta 30mm
Nha etiti Ogo ọkọlọtọ Nkwakọ ngwaahịa
Nke gara aga: BS1000
Osote: Ihe nrịbama oke
Ihe mgbochi ụlọ ahịa
Ndị na-agbaji ikuku